RASMI: Mikel Arteta oo isaga fariistay ciyaaraha isla markaana ku biiraya Man City si uu dhanka tababarka ugula shaqeeyo Guardiola – Gool FM
RASMI: Mikel Arteta oo isaga fariistay ciyaaraha isla markaana ku biiraya Man City si uu dhanka tababarka ugula shaqeeyo Guardiola
(London) 03 Luulyo 2016. Kabtankii kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa ka dhawaajiyay inuu isaga fariistay ciyaaraha si uu ugu biiro kooxda Man City isla markaana ka mid noqdo tababarayaasha ka hoos shaqeyn doona Pep Guardiola.
“Waxaan xaqiijinayaa inaan ka tagi doono Arsanal kana fariisanayo ciyaaraha si aan jago dhanka tababarka uga qabto Man City.” Arteta ayaa sidaa ku yiri qoraal uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka.
“Waxaan ku soo raaxeystay shan sano oo cajiib ah aan ku soo qaatay Arsenal, sharaf iy mudnaan gaar ah ayayna ii ahayd inaan kabtan u noqdo koox sidan oo kale u wayn.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan shaqsi ahaan u mahad celiyo tababaraha, maamulka sare, dhammaan asxaabteyda kooxda iyo dabcan taageerayaasha taageeradooda cajiibk ah oo aan helay waqtigii aan jooga Arsenal.
“Waxaan iminka si xiiso leh u sugayaa tartanka Man City. Fursada aan ugu biirayo Pep Guardiola iyo kooxdiisa waa mid cajiib ah si aan caadi ahayn ayaan u xiiseynayaa mustaqbalka.
34-jirka ayaa ku soo biiray Gunners 2011 kaddib markii uu wax lix sano ka badan ku soo qaatay kooxda Everton ee ka dhisan isla Ingiriiska.
150-kulan ayuu u saftay tababare Arsene Wenger wuxuuna kula guuleystay labo jeer FA Cup wuxuuna sidoo kale noqday kabtanka kooxda sanadii 2014.
Halkan ka aqriso warka uu Arteta ku soo qoray Twitter-kiisa:
Manchester United oo diyaar u ah in ay Paul Pogba ka dhigto saxiixa dunida ugu qaalisan
Arsene Wenger oo sheegay sababta uu ula soo wareegay Takuma Asano